Muuse Biixi: Waa nasiib darro, dagaal aanan u baahneyn baa dhex dhacaya Soomaaliya iyo Somaliland – Goobjoog News
Muuse Biixi: Waa nasiib darro, dagaal aanan u baahneyn baa dhex dhacaya Soomaaliya iyo Somaliland
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Hargeisa ayaa sheegay in wax laga xumaado tahay dagaal uu sheegay inuu ka dhex dhacayo Soomaaliya iyo Somaliland.
Muuse oo arrinta ka hadlayey waxaa uu yiri“Waa nasiib darro, dagaal aanan u baahneyn baa dhex dhacaya Soomaaliya iyo Somaliland, maanta Soomaaliya iyo Somaliland dagaal uma baahna, in la isu soo dhoweeyo ayey u baahan yihiin, waxaa loo baahan yahay in aanu iskaashanno si aanu dhibaatooyinka uga baxno, abaaraha, biyo la’aanta, iskuul la’aanta, caafimaad darida, shaqo la’aanta in aan iska kaashanno bey aheyd, Somaliland hadafkeedu taas ayuu ahaa”.
Muuse waxaa uu Soomaaliya ku eedeeyay in ay fahmi weysay daris wanaagga, Somalilandina ay hadda ku jiro difaac dadkeeda iyo qarannimadeeda ah.
“Marka waxaan ku talinayaa dadka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan Puntland ee qeylo dhaanta dheer ee qabiliga ah ee isirka wada, waxaan leeyahay waxaan ka wanaagsan innaga oo iskaashanna” ayuu intaasi raaciyay
Ugu dambeyntii waxaa Muuse ku dooday in xuduuda ay isticmaarkii sameeyeen oo Afrika oo dhan aaney iyaga badali Karin, Somalilanna ay mid tahay.
Dhageyso: Qiimo Koror Ku Yimid Kalluunka Suuqyada Kismaayo